Football Khabar » बार्सिलोनाको नयाँ प्रशिक्षकमा जाभी !
बार्सिलोनाको नयाँ प्रशिक्षकमा जाभी !
जारी सिजनको स्पेनिस सुपर कप हारेपछि बार्सिलोनाले प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेको विकल्प खोजी सुरु गरेको छ । बार्सिलोना अघिल्लो दिन कपको सेमिफाइनलमा एथ्लेटिको मड्रिडसँग ३–२ ले हार्दै उपाधिको रिङबाट आउट भएको थियो । क्लबको कमजोर प्रदर्शन र खराब नतिजाको कारण धेरैले प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेको कमजोर रणनीति र योजनालाई मानेका छन् ।
बार्सिलोना निकट पत्रिका ‘मुन्डो डेपोर्टिभो’का अनुसार बार्सिलोना भाल्भर्डेको स्थानमा आफ्ना पूर्वखेलाडी तथा पूर्वकप्तान जाभीलाई नयाँ प्रशिक्षक बनाउने कसरतमा लागेको छ । तर, यो तत्कालै हुनेछैन । बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्टोमेउले जारी सिजन सकिँदासम्म नतिजा जे जस्तो भए पनि भाल्भर्डेलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा देखिन्छन् । यो सिजन पनि टिमले ठूला उपाधि जित्न नसके भाल्भर्डे आफैंले समरमा क्लब छाड्ने र क्लबलाई नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त गर्न बाटो खुला हुने अपेक्षा बार्सिलोनलो लिएको छ ।
त्यसैअनुसार बार्सिलोनाले छलफल पनि अघि बढाएको छ । बार्सिलोना सुपर कपमा हार्नासाथ क्लबका खेल निर्देशक इरिक अबिडाल जाभीसँग कुरा गर्न कतार पुगेका थिए । उनले हाल जाभीले प्रशिक्षण गरिरहेको क्लब अल सदाका सिइयो ओस्कार ग्राउसँग जाभीको भविष्यबारे छलफल गरेको निर्देशक अबिडालले मिडियासँग स्वीकारेका छन् । सोक्रममा उनले जाभीसँग पनि बार्सिलोनाको करिअरबारे छलपल गरेका छन् ।
यो बताइन्छ कि, जाभी अहिले नै बार्सिलोना सम्हाल्न तयार छैनन् । भर्खर प्रशिक्षण करिअर सुरु गरेका जाभीले कम्तीमा एक सिजन कतारमै बिताउन चाहेका छन् । तर, जाभीले सिजन २०२०–२१ बाट बार्सिलोनाको टोली सम्हाल्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
प्रकाशित मिति २६ पुष २०७६, शनिबार ०९:२२